Fomba 3 hampiasana fandinihana hanaovana fikarohana amin'ny tsena tsara kokoa. Martech Zone
Alatsinainy 13 Febroary 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Hanna Johnson
Ny vintana dia raha mamaky ianao Martech Zone, efa fantatrao ny maha-zava-dehibe ny fanaovana fikarohana eny an-tsena amin'ny tetikady fandraharahana rehetra. Eto amin'ny SurveyMonkey, mino izahay fa ny fahalalana tsara rehefa mandray fanapahan-kevitra no zavatra tsara indrindra azonao atao amin'ny orinasanao (ary ny fiainanao manokana koa!).
Ny fanadihadiana an-tserasera dia fomba iray fanatanterahana fikarohana amin'ny tsena haingana, mora ary mora vidy. Ireto misy fomba 3 ahafahanao mampihatra azy ireo amin'ny paikadin'ny orinasanao anio:
1. Farito ny tsenanao
Azo heverina fa ny lafiny lehibe indrindra amin'ny fikarohana ny tsena dia ny famaritana ny tsena. Mety ho fantatrao amin'ny siansa ny vokatrao sy ny vokatrao, saingy izany dia vao mainka mitondra anao hatreto. Lehilahy vazaha sy tokan-tena 30 taona eo ho eo mividy shampooing anao, na tovovavy tanora no mpanjifanao lehibe indrindra? Ny valin'io fanontaniana io dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny tetikadin'ny orinasanao, noho izany dia tianao ho azo antoka fa matoky izany ianao.
Mandefasa fanadihadiana demografika tsotra ho an'ny mpanjifanao, ny mpanjifanao, na ny mpankafy anao. Mampiasà modely noforonin'ny manam-pahaizana, na mamorona anao. Anontanio azy ireo ny taonany, ny miralenta, ny firazanany, ny haavon'ny fanabeazana ary ny zavatra mahaliana azy ireo. Anontanio ny fomba ampiasan'izy ireo ny vokatrao na serivisinao, ary mangataha ny hevitr'izy ireo. Arakaraka ny ahalalanao ny momba azy ireo sy ny fomba ampiasan'izy ireo ny vokatrao no mahomby kokoa amin'ny fahafahanao mikarakara ny filan'izy ireo ary mitazona azy ireo hiverina bebe kokoa.
2. Fitsapana hevitra
Run a fitsapana hevitra mba hanombanana ny valin'ny mpanjifa amin'ny vokatra, marika na hevitra iray alohan'ny hampahafantarana azy amin'ny tsena. Izy io dia hanome fomba haingana sy haingana hanatsarana ny vokatrao, hamaritana ireo olana mety hitranga na lesoka, ary ho azo antoka fa lasibatra tsara ny sarinao na ny marikao.
Mametraha sary ny hevitrao amin'ny sary famantarana, sary, na doka amin'ny fanadihadiana an-tserasera ary asao ny mpihaino anao hisafidy izay tian'izy ireo indrindra. Anontanio azy ireo ny zavatra niavaka tamin'izy ireo, inona ny sary nahatonga azy ireo hieritreritra sy hahatsapa.
Ahoana raha tsy sary na sary famantarana ilay zavatra ilainao hevitra, fa foto-kevitra? Manorata famintinana fohy ho an'ny mpamaly vakiteny. Avy eo dia anontanio izy ireo hoe inona no tadidiny, inona ny fihetsik'izy ireo, inona ny olana mety hitranga. Ny olona samy hafa dia hahita fanamby sy fotoana samihafa amin'ny hevitrao, ary ho zava-dehibe ny valintenin'izy ireo rehefa mandamina tsara ny drafitrao ianao.
Tsy mahay manatratra ny mpihaino kendrenao? Misy iray azonao horesahina…
3. Mahazo valiny
Raha vantany vao nofaritanao ny demografikan'ny tsenanao, nosedrainao ny hevitrao, ary noforoninao ny vokatrao, dia misy dingana iray manan-danja kokoa amin'ity dingana ity. Mangataka sy mamakafaka Feedback dia zava-dehibe raha te-hanohy hanome valiny lehibe ianao. Fantaro izay tsara nataonao, inona ny olana mahazo ny olona, ​​ary ny làlana tian'izy ireo halehanao amin'ny ho avy.
Tsy mila mandray ny sosokevitra rehetra azonao ianao raha mangataka valiny. Fa amin'ny fangatahana izany sy amin'ny fijerena izay lazain'ny olona, ​​dia ho vonona kokoa ianao hahomby amin'ny ezaka famoronana ho avy. Ny mpanjifanao dia hankasitraka ny nanontanianao, ary hankasitraka ny fanatsarana nataonao bebe kokoa izy ireo.
Tsy mila atao vola ianao vao afaka manao fikarohana mahomby amin'ny tsena. Mila manararaotra ireo fitaovana lafo vidy misy anao amin'ny Internet fotsiny ianao. amin'ny SurveyMonkey miasa foana izahay manatsara ny teknolojika hanampy anao handray fanapahan-kevitra tsara indrindra. Amin'ny alàlan'ny fandefasana fanadihadiana hahatratra ny tsena kendrenao dia azonao antoka fa mahomby araka izay azo atao ny ezaka ataonao.
Fahafahana manao fanadihadiana!
Tags: fitsapana ny hevitraMponinatsena fikarohanafanadihadiana an-tseraserahevitra momba ny vokatraSurveyMonkeyfanadihadiana momba ny fikarohana eny an-tsena
Ny zavakanton'ny mpanjifa latsaka am-pitiavana
Febroary 13, 2012 amin'ny 10:53 PM
Manao fanadihadiana isan-taona momba ny media sosialy izahay, mampiasa surveymonkey voalohany. Tena talanjona aho tamin'ny nahamora ny fanorenana. Fa ny tena nahatonga ahy ho mpankafy dia ireo mpanangona samihafa. Tiako ny mahita izay sehatra mitondra ny ankamaroan'ny mamaly.
Tiako ny manasa anao hizara ny hevitrao. Traiso izao ny fanadihadiana.
Febroary 14, 2012 amin'ny 2:54 PM
Loraine - Miombon-kevitra aminao aho amin'ny fanehoan-kevitra "mora aorina". Rehefa nanao R&D ho an'ny fanombohana voalohany nataoko izahay dia niantehitra tamin'ny SurveyMonkey ho an'ny angon-drakitra rehetra. Tsapako fa ity fitaovana ity dia tokony ho fitakiana ho an'ny Mpandraharaha sy fanombohana!
Febroary 15, 2012 amin'ny 2:09 PM
Ny fanadihadihana dia mijanona ho loharano lehibe hanangonana vaovao manokana. Mahafinaritra ny mandre ny hevitrao momba ny fironana fanangonana ny valin-tenin'ny mpanjifa avy amin'ny media sosialy sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny habaka fanadihadiana amin'ny Internet "traditional". Moa ve isika mizotra mankany amin'ny toerana izay tsy hisy dikany intsony?